Ny hevitro momba ny fijery sy fahatsapana ny Libreoffice | Avy amin'ny Linux
Christopher castro | | fampiharana, GNU / Linux
Homeko anao ny hevitro manetriketrika momba ny adihevitra mitranga momba ny fanovana ny endrika sy ny "fanavaozana" ny tambajotram-pifandraisana LibreOffice.
Raha ny hevitro manokana dia tsy tokony ovaina ny interface, tsy hitako ny antony hanovana ny paradigma fampiasàna ny rindranasa izay nanjary fenitra ho an'ny fangatahana birao hatry ny ela.
Ny antony anaovako ny "fanavaozana" dia satria vokatry ny famoahana ny Micro $ oft Office 2007 sy ny fiovan'ny fisehoan'ny mpampiasa azy dia nahatonga ny interface sy sary baravarankely mifototra amin'ny menu toa ny zavatra taloha.
Na izany aza, iza no mahita ny interface vim ho antitra sy lany andro? Inona no holazainao raha miova ho "fanavaozana" ny vim ary manakaiky kokoa ny interface nano? Fampitahana tsy misy fotony fa fantatra tsara fa ny famokarana vim.
Ka maninona no manova zavatra izay efa toy izao foana ary mamokatra? Ankoatr'izay dia ilaina ny mianatra indray. Raha te hanova ny interface ianao isaky ny mahita safidy ianao hiverina amin'ny menus toy ny amin'ny Firefox, rehefa nanao ny menio tamina bokotra tokana izy ireo.
Ny tokony hovana amin'ny fomba fijeriko dia ny fampifangaroana amin'ny rafitra fiasa, ny fampidirana amin'ny GTK + ary miaraka amin'ny KDE amin'ny sehatra interface tsara dia tsara, nefa tsy mahatratra tsara noho ny zava-misy napetraka, afaka mampiasa mitovy sary masina ho an'ny sisa amin'ny rafitra.
Mikasika ny fampidirana amin'ireo olona LibreOffice, ao amin'ny Firefox dia tsy ampiasaiko izany fa tsara fa manana fahalalahana mampifanaraka ny fandaharana araka izay itiavantsika azy izahay.
Ary hatreto ny hevitro momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny hevitro momba ny fijery sy fahatsapana an'i Libreoffice
Manaiky tanteraka anao!
Ny hevitro dia ny tsy maintsy ataon'izy ireo zavatra, ary tsy vitan'ny fanatsarana ny fampidirina amin'ny birao, izay hevitra tsara, fa koa hanome azy interface tsara, izay mitazona ny rafi-pitobiana, fampiasana tsara kokoa ny habaka sy izay ny sary masina dia voarindra amin'ny alàlan'ny fiasa kokoa noho ny amin'ny tsipika tsotra.
Raha tsy; Topazo maso tsara eo an-tampony havanana ny habaka rehetra malalaka, eny, azonao atao ny manampy ny bokotra tadiavinao, fa amin'ny fomba tena tsy mirehitra.
Mihevitra aho fa tokony hanao zavatra izy ireo.
PS: Ny olan'ny olona, ​​ny fomba firefox, tsara ... Tsy mpamorona aho na zavatra hafa toa izany fa heveriko fa mihoatra ny iray no hamono tena rehefa mahita an'io.
Fantatro fa fetra amin'ny GTK izy ireo, fa ny olana amin'ny fampidirana ny save, undo, ... ny bokotra ao amin'ny bara lohateny dia toa fomba tsara iray hanararaotana ny habaka ary hanokanana toerana ho an'ny asa manokana, raha tsy hitanao ny fandrosoana inona no atao noho ny granita (avy amin'ny os fototra)
Tsy fanesoana io (na voasoratra hoe)
Miombon-kevitra aminy 3 isika 😛 Aleo mampiasa sary masina + lohahevitra GTK / Qt toy izay mampiasa People (vonoy ilay manana ny hevitra…).
Fa azo antoka fa mora kokoa ny nampiharina na tao ambadiky ny sakaizan'ilay programmer nilaza taminy fa te-hiaraka mametraka ny sarin'izy roa izy ireo.
PS: Miala tsiny fa somary macho ihany aho
tsia, tonga lafatra xD
socax dia hoy izy:
Raha tsy miditra am-pifanakalozan-kevitra ary te-hanome zavatra mahaliana lehilahy efa nanao Libreoffice Mockup vaovao, azafady mba jereo, na dia tiako ampidirina ao anaty lahatsoratra aza ianao.
Mamaly ny socax
Manaiky aho fa hitondra ny menus safidy sy ny endri-javatra isan-karazany amin'ny tokotanin-tsambo satria misy dikany betsaka amin'ny mpanara-maso malalaka ampiasaintsika ankehitriny, raha toa ka nampiasa ireo izay ampiasaina amin'ny Mac mandritra ny taona maro isika, dia misy dikany kokoa ny famindrana azy ireo amin'ny toerana ambony.
Ny tena tsy maharesy lahatra ahy dia ny fijery "plastika" ananan'ny sisiny havia ambony sy ambany, toy ny interface ergonomic an'ny "gadget" fa tsy rafitra rindrambaiko.
Ny tenako manokana dia tiako ny tsipika maranitra sy voafaritra kokoa miaraka amin'ny zoro maranitra, raha ny marina, ny firafitry ny famolavolana mandritra ny fotoana fohy dia miaraka amin'ny tsipika mahitsy mahery vaika sy zoro maranitra.
Raha mijery izay ho fisehoan'ny KDE 4.10 vaovao ianao, dia hahita fahasamihafana lehibe eo amin'ny motera "Air" ankehitriny izay boribory sy feno vatana ary ilay motif vaovao miolakolaka sy mateza.
Miala tsiny, diso tafahoatra aho. Ho ahy ve izany, izay miasa betsaka amin'ny rindranasa toa izao, ny fanontaniana dia ny famokarana. Te hanana zavatra mahatonga ahy hamokatra sy hamokatra (farafaharatsiny amin'ny asako) ny fotoana. Ireo famolavolana «mahafinaritra» vaovao toa ny an'ny M $ ireo dia tsy mamokatra velively. Mandany fotoana be dia be izy ireo. Toa tsara ny fanesoanao, saingy izany no hevitro (na dia azo hatsaraina aza ny loko).
Marina izany. Azoko porofoina fa marina ny anao. Raiso ohatra Blender, lohahevitra tsy mandeha tanteraka, fa Blender hatramin'ny kinovan'ny 2.4 dia namokatra tokoa. Malemy sy mahatsiravina, nefa mamokatra. Ao amin'ny kinova 2.5 ny mpampiasa rehetra an'ity rindrambaiko ity dia nanana tsiro ratsy teo am-bavany noho ny fiovana lehibe, tena mampalahelo izany. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia zatra izany aho.
Tiako ilay fanesoana, fa ny soso-kevitra iray, ny soso-kevitra mitsivalana mahasoa amin'ny rantsantanana dia maniry ny hametrahana ICONS - ideograms, anaty filaharana 3 × 3 miaraka amin'ny iray amin'izy ireo mba hiverina ary hahatratra ny safidy 7 na 8 ary ny lafiny iray hafa ho an'ny izay mampiasa Unity na dock mitsangana hafa amin'ny takelaka ho avy sy telefaona mihazakazaka ubuntu na Linux hafa izay antenaiko hivoaka, asaivo misy dock ny rindrambaiko mijoro eo ankavanana ary ny takelaka misy doza mitsivalana rantsan-tànana amin'ny ilan'ny efijery , sady miafina no navoaka rehefa nilaina.
Misaotra betsaka amin'ny asanao, manantena aho fa resy lahatra amin'ny fandraisako anjara ianao hanatsarana ny hevitra zarainay ny zoro mitsangana amin'ny endrika dock misy sary masina mahaliana amin'ny rantsan-tànana.
Nanao mockup tamin'ny Gtk 3 aho
// ///.... // ///.... // ///.
// ///.... // ///....
// ///..... // ///..... /
// ///.... // ///..... // ///.
// ///.... // ///.... // ///....
Saingy ny interface LibreOffice dia miorina amin'ny tranomboky VCL. Tena ratsy fa tsy nahita tutorial VCL aho. Nanontany an'ireo bandy LibreOffice aho fa tsy manana API
AOKA, efa nalefanao tao amin'ny lisitra LO ve izy ireo? Raha toa ka manana fitaomana tsy azo lavina an'ny Mac izy ireo - raha toa isika ka toa ny GNOME rehetra - tsy mampino azy ireo fotsiny, ny roa voalohany no tena tiako indrindra, ny voalohany miantsoantso USABILITY avy eny an-tampontrano, miaraka amin'ny fifanoherana be dia be ary ny interface madio, ary ny faharoa, mamoaka fotsiny ny hakantony.
Afaka nihazakazaka ilay programa kely ianao, mora ny misintona azy ary mampandeha azy. Manao tsindry roa sosona amin'ny programa. Fa mila manana GNOME 3.6 sy maritrano 64-kely ianao
Miaraka amin'i Charles Schultz avy ao amin'ny LibreOffice sy ny ekipany aho saingy tsy misy ilana azy ity kaody ity satria voasoratra ao amin'ny Gtk 3.6.
Ireo programmer LibreOffice dia mampiasa ny tranomboky VCL.
Nanontaniako tamin'i Michael Meeks avy amin'ny VCL ny API fa tsy manana API izy ireo. Ny fanovana ihany no azon'izy ireo atao raha tiany. Raha mahita tutorial momba ny VCL Library ianao dia ampahafantaro ahy, io no fomba tokana hanerena azy ireo hamorona endrika sary vaovao.
Tiako raha misy olana, dia nanova ny programa izy ireo hanatsarana ny interface, hifaninana fa tsy hanao fork intsony satria na dia tamin'ity fomba ity aza dia nivoaka ny mpisolo toerana tena tsara izy ireo amin'ny fotoana maharitra, very hevitra ireo mpampiasa solosaina mahazatra, programa iray izay Tokony hanova izy ireo fa ho abiword, heverina fa tonian-dahatsoratra gnome io, tsy tokony hanomboka hatramin'ny voalohany izy ireo ary GTK io.
Momba ny VCL araka ny wikipedia dia OOP i pascal ary heveriko fa ny fikarohana ao amin'ny google dia misy valiny, saingy feso ho an'ny windows izy io, tsy haiko na inona na inona momba an'io lohahevitra io :(.
Ny Microsoft "Ribbon" dia toa ahy _ tena mahomby_ mitovy amin'ny Unity HUD, na dia amina toe-javatra hafa mihitsy aza.
Ny Ribbon dia manamora ny fitadiavana ilay safidy na endri-javatra tadiavintsika amin'ny alàlan'ny menus konteksto, dinika ary voafaritra tsara miaraka amina sary masina sy lohateny ho an'ireo olona mbola tsy nampiasa ny fampiharana akory - miaraka amin'ny fahafaha-mamorona kisary hitsin-dàlana amin'ireo safidy fampiasa indrindra. Tanjona avy any afovoan-tany. Mifanohitra amin'izany no izy, miaraka amin'ny rafitry ny menio nentim-paharazana, ny olona iray dia afaka mandany fotoana milentika mandritra ny fotoana maharitra amin'ny menus milentika mandra-pahitanao ilay fiasa ilainao imbetsaka amin'ny toerana izay tsy noeritreretinay hojerena mihitsy.
Ataovy ao an-tsaina fa ny paradigma fampiasana ny menio dia manodidina ny 20 taona ary na dia safidy tsara aza izany tamin'ny voalohany, androany dia mampiseho ny soritr'aretin'ny taona satria tsy mitovy ny mampiasa rindranasa izay nanana safidy sy submenue vitsivitsy. noho, ohatra, ny LibreOffice.
Ilaina ny paradigma vaovao amin'ny fampiasana.
Ny HUD etsy ankilany dia tena be mpampiasa tokoa rehefa fantatsika mialoha ny safidy tadiavintsika.
Nampiasa rafitra isan-karazany aho hatramin'ny mbola kely toy ny Timex Sinclair, Sinclair Spectrum, Commodore 64, MSX ary MSX2 ary Atari 810XL, fohifohy Apple Macintosh voalohany miaraka amina floppy drive sy monitor graphic, OS2 Warp any ambony lavitra, XT miaraka amber monitor - ireo mpanara-maso ny Ny phosphor maintso dia nanjavona rehefa nanomboka tamin'ny 8086-, 286 niaraka tamin'i Hercules aho ary avy eo ny SVGA, 386, Pentium, nanitsy ny lohany azimuth hampidirana ireo programa cassette ary nampiasà trondro 5'1 / 4 sy 3'1 / 2 alohan'ny ananana HD 40 meg voalohany.
Ny menio nentim-paharazana araka ny ahalalantsika fa hanjavona amin'ny farany, na dia mety kokoa aza ny hijanonany ho safidy fallback, ny zava-misy dia androany miaraka amin'ireo teknolojia sy ny fahafaha-misy izay misy, tsy misy dikany ny famerana ny tenantsika amin'ny fomba iray hifandraisana amin'ilay rindrambaiko efa lany daty raha misy ny solony ambony. .
Saingy, manavotra ireo izay tena mahasarika ny rafitry ny menio amin'ny olona sisa mazàna dia sarotra be ny mampifanaraka ny fanovana vaovao sy mamantatra fanao vaovao sy tsara indrindra satria tsy nahatratra ny foto-kevitra velively izy ireo fa mamerina fihetsika sasany toa ny automata mankany hahatratra tanjona farany.
Pavlov dia tsy maintsy fety amin'ny mpampiasa solosaina antonony 2013>: D
Nozaraiko izay voalaza tao amin'ilay lahatsoratra, ny fampiharana izay ampiasaina amin'ny asa dia tsy maintsy misy sary mahonon-tena, raha tiantsika haseho izany, satria manaingo azy isika, ny olona tsirairay dia misafidy ny endrika tiany hananana, satria izany no safidy.
Ahoana raha te hahalala aho ary misy manazava ny fomba fanaovana azy, dia ny manana ny interface KDE fa tsy ny Gnome ao amin'ny LibreOffice 3.6
Misokatra hianatra aho.
"Nozaraiko izay voalaza tao amin'ilay lahatsoratra, ny fampiharana izay ampiasaina amin'ny asa dia tokony hanana sary mahonon-tena"
Mariho fa ny MacOS dia tsy natao ho an'ny asa PROFESSIONAL ihany fa manana sary manintona manokana izay tsy manala amin'ny fampiasana  na famokarana. Raha ny marina, ny Mac dia mpitarika ny sehatry ny sary sy haino aman-jery nandritra ny taona maro. Etsy ankilany, ny Windows 7 dia voaravaka amin'ny endriny teo aloha ankoatry ny fitondrana paradigma vaovao izay tsy nesorina tamin'ny fampiasana na ny famokarana - hoy aho ny mifanohitra amin'izay.
Tsy azoko hoe maninona ny fiankinan-doha sy ny vokatra no mifandona amin'ny hatsarana: p, ny ohatra tsara indrindra amin'ireo fiheverana ireo ao amin'ny tontolon'ny F / LOSS dia ny KDE SC.
"Raha tiantsika ny hisehoseho"
Azo antoka, satria misy maro no mirehareha amin'ny fampiasana FWM na IceWM na WindowsManagers tena maizina - ary tena ratsy tarehy - amin'ny resaka spartan sy sarotra hamboarina.
Misy ny namako 🙂
"Eny, noravahanay izy io, samy misafidy ny endrika tiany hananana ny tsirairay, izany no ilana ny safidy."
Ary amin'ity sehatra ity dia tsy mitovy ny GNU / Linux, hery ho an'ny mpampiasa !!!
Ny fahafahaingoana na fampifanarahana tontolo iainana Windows dia sangisangy, ny an'ny Mac dia tsy misy (fanovana sary an-tsaina sy ny toeran'ny dock? Graphite for aqua? XD)
"Ahoana raha te hahafantatra aho ary misy manazava ny fomba hanaovana azy, dia ny manana ny interface KDE fa tsy ny Gnome ao amin'ny LibreOffice 3.6"
Sarotra satria ny LibreOffice dia JAVA - eny, ratsy tarehy raha ny fahitana azy.
Fotoana kely lasa izay, Kaza dia nanao lahatsoratra momba ny fomba hampidirana tsara kokoa ny LibreOffice ao amin'ny KDE SC fa tsy hitako izy, manoro anao aho mba jereo ny arisivan'ny bilaogy.
Na dia sarotra ekena aza ny sasany aminareo, ny Ribbon dia iray amin'ireo zavatra nataon'i Microsoft tsara, raha tsy avy any an-kafa.
Ankehitriny, tsy te ho mavesatra na inona na inona aho, saingy mieritreritra aho fa amin'ny lahatsoratra iray dia tsy tokony hihatra ohatra ny Micro $ matetika, sosokevitra fotsiny izany. Na dia maro amintsika aza no mahita fa mahafinaritra ny manoratra Güindous, Winbugs, Micro $ matetika na Microshit XD, amin'ny lahatsoratra matotra dia tsy io no safidy tsara indrindra. Soso-kevitra fotsiny izany. Tokony hiantso ny anarany amin'ny anarany ianao.
Ankehitriny, na ny interface interface dia miova, ny fampiasana olona na ny fampidirana tsara kokoa ary ny fanovana ny sary masina dia toa tsara amiko, saingy alao ny sainao hahita hoe iza amin'izy ireo.
Manaraka aho fa raha ny fanamarihana omena ny orinasa dia manala baraka, mandehana ary mandehana, fa ny fanomezana an'izany azy amin'ny lahatsoratra rehetra dia mahatonga azy ho very sokajy.
Ankoatr'izay, ny fanilihana ny orinasa amin'ny fampiasana ny $ sign fa tsy ny taratasy 's' dia hadalana, Microsoft IS A Orinasa, TSY ASSOCIATION CHARITY ary noho izany ny tena tanjona farany sy ny farany dia ny hiteraka dividends ho an'ireo tompon-tany, izany no antony tokana ary izay misy ny orinasa, toy ny orinasa an-tapitrisany maro isan-karazany manerantany: miteraka fidiram-bola.
Na izany na tsy izany, azontsika atao ny milaza fa ny orinasa Microsoft dia manana fanao raharaham-barotra manjombona - farafaharatsiny-, fa ny rafitra miasa ankehitriny dia tsy mifanaraka amin'ny haitao GNU / Linux na BSD, fa mitady hamorona mpihaino babo, izay rehefa mahita orinasa miaraka aminy Ireo haitao vaovao dia mitady hividy azy ireo ary hanafoana ireo orinasa voalaza fa amin'ny alàlan'ny fitrandrahana ny loharanon-karenany ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mandany azy ireo izany, izay toa manana paikady tsy mitongilana amin'ny indostrian'ny fiarovana ny solosaina mba hamoronana rindrambaiko marefo amin'ny alàlan'ny famolavolana, satria natao am-bahoaka io taratasy io. izay nitenenan'i Agnitum Software an'i Microsoft momba ny fiarovana ny rafitra Vista vaovao ary nandrisika azy handanjalanja ny vokatra mba hisorohana ny sehatry ny solosaina iray manontolo tsy hanjavona ...
Amin'ny lafiny ara-bola, Microsoft dia orinasa tsy manara-penitra ihany koa, jereo fotsiny ny tantarany, izay tototry ny tampon-tendrombohitra sy lohasaha, raha i Apple kosa dia sary hosodoko kely vao haingana - na i Jobs no nitantana azy.
Ary koa, nisy nahita an'i Ballmer nanao famelabelarana nataony malaza? Tonga tampoka ilay rangahy ary miantsoantso - tsy eo aminy ny satr'akoho sy ny zana-boriky roa-, rehefa afaka 5 minitra dia tsemboka daholo izy tamin'ilay akanjo lena izay maharikoriko, taitaitra ary manana endrika adaladala, adaladala, ireo olona nanatrika Manana tarehy lava izy ary raha mankalaza ny 1 na 5 fisehoan-javatra na vazivazy izy ireo dia firaketana an-tsoratra izany.
Ny lehiben'ny orinasa dia milaza betsaka momba ny fomba fivezivezen'ny orinasa ao anatiny ary i Ballmer dia iray amin'ireo toetra ratsy indrindra amin'ny indostria ankehitriny.
Farany: Microsoft ary indrindra i Ballmer no nanomboka nanisy marika ny "GNU / Linux" ho "kaominista" manodidina ny taona 2000, loza mitatao ho an'ny firenena, zavatra tsy maintsy niadiana mandra-pahafatiny na hidona ny toekarena! Vitan'izy ireo mihitsy ny nahalatsaka loholona roa avy tao an-tranony mba hanohana azy ireo: p
Androany i Windows Azure dia manolotra mpizara GNU / Linux eo amin'ireo serivisy premium.
Mandra-pahoviana mandra-pahafatin'ny Microsoft? Voaray ny filokana 😀
Tsy afaka nanoratra azy tsara kokoa aho.
Ankehitriny, ny fianjeran'ny Microsoft… Tsy haiko izay eritreretina. Etsy andaniny, ny rafitra fiasan'ny Windows no be mpampiasa indrindra, fa etsy ankilany, 70% amin'ireo mpampiasa anton'ity rafitra ity dia tsy mandoa ny fahazoan-dàlana omeny.
Amin'ny lafiny iray, manana Nokia ho mpiray tsikombakomba izy ireo, fa amin'ny lafiny iray ... Android dia misy amin'ny finday maro hafa.
Microsoft dia manana ny rafi-piasa vaovao hanombohana ny tenany ao amin'ny CES 2013 ho "Ny tolo-kevitra minimalista vaovao ary namboarina ho fitaovana finday" fa etsy ankilany, manome efijery mainty misy faran'izay mafy amin'ny efijery Samsung izy, fa raha tsy diso aho dia tompon'andraikitra Windows 7 io.
Heveriko fa ny fidiram-bola tokana sy azo antoka ho an'ny orinasa dia ny Xbox sy ny Halo, izay tiako aza ny fampifangaroana.
Tsy fantatro ny marina, mety hianjera i Microsoft, saingy heveriko fa hianjera amin'ny Windows ho toy ny rafitra miasa be mpampiasa indrindra io.
Heh, "efijery mainty ratsy eo amin'ny efijery Samsung" Ny hadisoako, dia "amin'ny efijery Sony".
Ary eny, ny paikady nodinihina tamim-pitandremana ny famelana ny piraty XP sy "hanome lisansa maimaimpoana" amin'ireo fonosana rindrambaiko ho an'ireo andrim-pianarana mba hamoronana fiankinan-doha ara-teknolojia + ny fifanarahana pantagruélicos miaraka amin'ireo orinasa mpamokatra HW dia nahatonga izany ho an'ny ankamaroan'ny fitaovana tsy azo entina. mbola mitantana Windows izy ireo ary tsy izany ihany, fa ambonin'izany dia mihazakazaka XP miaraka amin'ny IE 6 izy ireo izay midika fa ny orinasa dia mbola manana fampidirana be dia be eo amin'ny tsenan'ny mpanjifa.
Raha ny Xbox… reny mampihomehy, mahafatifaty loatra !!! Toy ny Sony PS3, jiolahin-tsambo hafa! xD
Efa ela aho no te-hividy console fa tsy mety manome ny volako amin'ireo orinasa roa ireo 🙁
Manantena aho fa Piston na izay antsoin'ny ho avy Steam console, tsy ho ela dia ho tonga ... console lalao izay mihazakazaka GNU / Linux, Ubuntu mazava kokoa!
Misy manatsatoka ahy azafady: D: D: D
socarx dia hoy izy:
Ny hevitro manokana, Ribbon dia hevitra tena tsara, saingy tsy dia ampiharina amin'io lafiny io fa mangalatra toerana be dia be eo amin'ny efijery, izany hoe, amin'ny tsipika mitsangana (raha isaina izy ireo, dia misy tsipika 6 miaraka amin'ireo sary famantarana widget sy ny hafa, manomboka amin'ny menio mankany amin'ny status bar) izay ao amin'ny takelaka dia manolotra ny fahitana ny zava-dehibe na ny antontan-taratasy.
Ampihariko amin'ny mockup mihintsy aho mampiditra Ribbon fa tsy mahafoy ny fahitana.
Etsy andanin'izany, mizara ny hevitro aho fa tsy mifanaraka ny famokarana sy ny hatsarana, azo hatsaraina ny zava-drehetra.
Mamaly an'i socarx
Ok, ho raisiko ho soso-kevitra ho an'ny lahatsoratra manaraka.
+1 tena tsara hoy
Manaiky aho. Tsy ilaina ny manova ny interface. Araka ny efa noresahiko tao amin'ny G +, olana momba ny famokarana izany ary ireo fanovana ireo, ohatra, Microsoft, dia nahatonga ahy (manokana) hankahala azy ireo isan'andro. Ity interface farany an'ny M $ ity (satria efa noresahin'izy ireo hatry ny ela) ny zavatra ataony dia mandany fotoana be dia be ny iray. Tena tiako ny interface LibreOffice ankehitriny ary mieritreritra aho fa tokony hijanona ho toy izany. Ankoatr'izay ao amin'ny Ubuntu dia miharo tsara amin'ny Global Menu. Manantena aho fa tsy hanao fiovana mahery vaika izy ireo.
Miaraka amin'ny fanovana ny sary masina sy ny fampidirana azy bebe kokoa amin'ny KDE Faly aho, tsy hitako ny filàna fanovana bebe kokoa, tsy azoko mihitsy ireo izay mangataka ny hanova ny interface.
Na dia ekeko aza amin'ny ankapobeny raha mieritreritra aho fa misy zavatra tokony hatao mba hanomezana endrika vaovao an'i Libreoffice. Amin'ity voalaza etsy ambony ity dia tsy te-hanao reengineering aho, raha tsy hoe mifangaro tsara kokoa amin'ny birao nofidinao. Tsy haiko raha noho ny fetran'ny fetran'ny GTK na raharaha teknika hafa, fa raha jereko amin'ny fomba fijeriko manokana dia tafiditra ao anaty suite ilay fijery sy fahatsapana ny biraonao.
Marina fa tsara ny hevitry ny kofehy ary tsara ihany koa ny fananana menus, heveriko ho somary daty ihany io. Andro hafa nijery ny zavatra nataoko dia nahita PC 486SX 33 Mhz, windows 95 ary Office 95. Ny marina rehefa nahita ny Office 95 Libreoffice tonga tao an-tsaiko.
Raha fintinina, ny tsiro dia vaky ho karazany.
Mampalahelo fa mampatsiahy ny MS Office 2003 tokoa ny libreoffice.
Ary inona no mampalahelo amin'izany?
Salama, miombon-kevitra tanteraka amin'ny hevitr'i msx sy Blaire Pascal aho, zavatra tokony hatao anarana araka ny maha-izy azy ireo fa tsy amin'ny zavatra toa ny "Guindous" na ohatra hafa, toa ratsy toa izao ny lahatsoratra ary bebe kokoa rehefa miresaka momba ny rindrambaiko manan-danja toy ny LibreOffice isika.
Mikasika ny LibreOffice, maharary ny miaiky fa ny asa nataon'i Microsoft tamin'ny Ribbon ao am-piasana dia zavatra tena tsara sy mora ampiasaina, te hanana zavatra mitovy amin'ny LibreOffice aho satria ny mivezivezy amin'ny menus dia efa somary antitra ary tsy ny olona rehefa mampiasa ny suite an'ny birao dia mirehareha amin'ny interface, fa mora kokoa ny miasa raha manana safidy bebe kokoa ianao na akaiky na akaiky, fa tsy mampiseho menus vaovao.
Hitako tsara momba ny olona izany, saingy manantena aho fa hisy fanovana interface tsara, ary tiako ihany koa ny tsy hiankina be loatra amin'ny fanitarana, na dia hampitombo ny habeny aza izy io, saingy mahasosotra tokoa ny mila mandeha misintona fanitarana hanaovana zavatra sasany, tsy tiako izany Ny ankamaroan'io filozofia mamela ny antsasaky malefaka io ary ny hafa mikarakara ireo fampiasa hafa misy fanitarana.
Offtopic: tiako ny vondron'olona rindrambaiko malalaka sy misokatra, na dia saika ny mifanohitra amin'izay foana aza no ampiasaiko, fa manintona ahy foana io tontolo io, izany no mahatonga ahy mitsidika an'ity bilaogy ity matetika 😛
Eny, amin'ny manaraka manao op-ed aho, hiezaka ny hanome anarana ny anarany avy aho.
+ 100… Araka ny voalazan'ilay lahatsoratra, araka ny hevitro, ny tokony hojeren'izy ireo bebe kokoa dia ny fanatsarana ny fampidirana LibreOffice ary hamaranana ny fandefasana azy, satria mbola tsy ampy antsipirihany sy fiasa tokony hanarahan'izy ireo bebe kokoa. Farany, raha hanova ny interface ny mpampiasa izy ireo, farafaharatsiny avelao ny safidy hahafahana miverina amin'ny interface ankehitriny, mba hahafahantsika izay efa zatra izany manohy mampiasa azy; Mihoatra ny olana "fahazarana", olana momba ny famokarana izany, izay tokony hihena mandritra ny dingana voalohany amin'ny fiankinan-doha amin'ny interface vaovao.
Tsy manam-pahaizana amin'ny Linux aho, mahita ny rafitra miasa raha ny fahitan'ny mpampiasa fa tsy mpandahatra programa. Raha mahafinaritra ny tontolon'ny asa, mamokatra
mitombo. Fa maninona no mainty na volondavenona ny tontolo iainana? Manintona ny maso ny Microsoft Office na dia tsy mitombina aza ny zava-bitany. Ny LibreOffice dia ambony lavitra saingy mety ho tsara ihany koa izy io miaraka amina sary miloko malefaka sy endrika maoderina. Efa zatra ny zava-drehetra. Nampiasa Office 2003 aho ary
takatra tsara. Tonga i Ribbon ary tsy nahazatra izany aho. Ny Libreoffice dia toa ny Office 2003 ary tsy hitako izay tsy mety. Efa zatra ny zava-drehetra.
Tsy ekeko mihitsy ilay lahatsoratra. Tsy nisy olona tia ny bara Office 2007 rehefa nahita izany izy ireo, kely indrindra tamintsika rehetra izay linuxers. Saingy any am-piasana noho ny adidy dia tsy maintsy nampiasa izany aho ary raha ny marina dia mahatalanjona. Zavatra hafa ihany io, ary haingana kokoa ny safidy rehetra ampiasaina. Mora be ny mandrafitra endrika tsara tarehy (mamorona latabatra ary jereo izay misy safidy, ary avy eo lazao amiko).
Tiako ny LibreOffice, saingy mila ovaina ireo bara ireo.
Hifidy an'Andriamatoa MSX aho, izay naneho hevitra tsara araka ny hevitro, hanoratra lahatsoratra mifanohitra amin'izany.
"Tsy nisy olona tia ny bara Office 2007 rehefa nahita izany izy ireo, kely indrindra tamintsika rehetra izay linuxer."
Tiako izany, azoko avy hatrany ny onja ary araky ny voalazanao rehefa nanomboka nampiasa azy io dia hinge, toa ny mandeha amin'ny Windows for Workgroups (Windows 3.11) mankany W95, ny zava-mitranga dia mitsambikimbikina toy ny ronono nandrahoina daholo ny olona tsy mila akory a) ny fotoana handrefesana ny fanovana ary b) ny fotoana hanandramana hametrahana ilay fanovana, samy fepetra takiana tsy azo ihodivirana hitsarana zavatra iray.
Avy eo dia misy ny mangidihidy hafa: raha vokatra Microsoft dia berreta-by-design, izay tsy izany koa (mitandrema, izaho no mpitsikera voalohany ny orinasa amin'ny fomba fanaony).
Izy io dia mitovy amin'ny putery izay nitranga fotoana vitsy lasa izay tao amin'ny lisitry ny Arch rehefa nanapa-kevitra ny handray ny systemd ho PID1 vaovao ary ho an'ny tsikera maro kokoa voarain'ireo devoly dia nanazava izy ireo fa rehefa avy nandinika lalina ny fanapahan-kevitra dia nisy ny fanovana. mihoatra ny kapoka sy ny hatezeran'ny mpampiasa misavoritaka.
Soa ihany fa misy ra vaovao izay, miaraka amina vintana kely, eo ambany fitantanan'ny sasany amin'ireo maherifo F / LOSS, dia azon'izy ireo atao ny mandringana tsikelikely ny angano sy ny paradigma izay heverina fa tsy voakitikitika noho ny horohoron'olona maro taloha! >: - D
Hadinoko: ny Windows 8 amin'ny fitaovana mikasika ny IS THE BOMB, mihoatra ny fitsarana estetika (tiako manokana ny Metro) tena milay sy malefaka izy io, WOOOOOW, miala amin'ny farango, tena ahazoana aina tokoa ary mitondra refy vaovao hampiasaina ny takelaka na fitaovana mikasika amin'ny ankapobeny, SUPERIOR BE TAMIN'NY IOS hita amin'ny iPads.
Mazava ho azy fa misy fatiantoka iray: toy ny vokatra MS rehetra, ny hatsarana dia matetika miresaka ny surface
Ny olana voalohany dia ny fanarahana ny dian'ny Apple sy Facebook ny MS amin'ny fanidiana ny sehatr'izy ireo sy ny famoronana ny ekosistemany manokana, noho izany ny fampiasana "mandroso" an'ny fitaovana mikasika Windows 8 dia voafetra tokoa - toy ny amin'ny iPad rehetra. Ny fitaovana toy izany dia tsy afaka ampiasaintsika araka ny nokasaina hampiasaina, tsy misy fanapahana hacking.
Ny olana faharoa dia eo ambanin'ny Windows 8 ary na eo aza ny kernel vaovao sy ny API mifandraika amin'izany dia misy ihany ny panorama tsy miova amin'ny vokatra Microsoft: hoditry ny teknolojia, Frankeinsoft miraikitra amin'ny tsiranoka (amin'ny endrika tsara indrindra Ren & Stimpy, Rocko na Bob Sponjy) ary eo an-tsisin'ny tsofina amin'ny fotoana rehetra amin'ny lovan'ilay orinasa ny fahazoana ireo haitao avy amin'ny antoko fahatelo izay efa novolavolaina tamin'ny dingana mandroso, manipy azy any amin'ny departemantan'ny injeniera ary manome baiko azy ireo hifanaraka amin'izany kanefa afaka miditra amin'ny vokatra ankehitriny izy ireo satria tokony ho vonona ao anatin'ny tapa-bolana.
Amin'ity lafiny ity dia tsy misy mandresy ny Android ... afa-tsy ny Java (Dalvik) mandeha amin'ny kernel Linux novaina be heavily
Mbola ho avy ny tsara: Tizen, FirefoxOS, PlasmaActive 4 (mandeha amin'ny Mer, ny fivoaran'ny MeeGo, 100% SL !!!)
Misy ho avy iray manontolo ny fanapahana miandry antsika =)
Ny zavatra ratsy momba ny Metro tiako dia ny manapa-kevitra ny hampihatra azy amin'ny birao aho, ary maro no hilaza fa izy ireo dia parlasn'ny linuxer izay mankahala an'i Windows, saingy tsy (farafaharatsiny amiko) ny fampiasana azy isan'andro amin'ny solosaina findainy. Raha mampiasa Windows aho dia hifikitra amin'ny Windows 7.
Fa eny, mifanaraka amin'ny nolazainao aho. Ohatra, ny fiovana avy amin'ny Gnome 2 ho Gnome 3 (DE sy Shell) dia tampoka dia tampoka, na dia farafaharatsiny tsy dia mitaky be loatra amin'ny metro fotsiny aho, fa hitanao fa teo izy io dia nisambotra mpampiasa tsikelikely hatramin'ny 2011, ary ho ahy Ny gusto dia iray amin'ireo tontolon'ny birao be mpampiasa indrindra any, toy ny Unity ihany, voatsikera eny ifotony ary betsaka ny ra no nalaina tamina bilaogy sy forum, fa avy ao koa i Natty, manintona ireo mpampiasa ary mihatsara isaky ny famoahana. Afaka nanonona tranga tsy manam-petra aho, ohatra, ny KDE 3 ka hatramin'ny 4, ny Python 2 ka hatramin'ny Python 3, ireo lohahevitra vaovao avy amin'ny pejy malaza be antsoina hoe DesdeLinux 😀 sy ny hafa, saingy tsara ny fanovana. Natomboka tamin'ny Arch tara aho, efa nanana Systemd izy ireo, ary ankehitriny ampitahako ny torolàlana momba ny fametrahana ary toa hitako fa nanamora ny fametrahana ny Systemd, ny daemon tany am-piandohana (na dia te hanana rc.conf fotsiny aza aho ho toy ny rakitra fikirakira tokana) izay ho amin'ny tsaratsara kokoa.
Ny Metro dia toa tsara, tsiranoka ary tsara tarehy, na dia manodidina azy aza aho dia somary nisalasala kely ihany aho, toy ny amin'ny toeran'ny birao miorina sy ny fizarana marin-toerana hahaha, tsy maharikoriko azy aho (eo amin'ny birao ihany), ary toa tsara ihany koa ny kofehy. Manantena aho fa tsy hasiana fantsom-pifandraisana no ampiasain'izy ireo satria mety ho fahatezerana lehibe hafa izany, fa zavatra maoderina kokoa noho ny menio misy ny toe-javatra.
Heh, "Tsy nisy olona tia ny bara Office 2007 rehefa nahita izany izy ireo, kely indrindra tamintsika rehetra izay mpampiasa Linux." Rariny tanteraka ny tsy fitiavan'izy ireo azy, ratsy ny lohahevitra Microsoft Office 2007. Niova ny zava-drehetra nanomboka tamin'ny MS Office 2010, tsy haiko, satria nataon'izy ireo "madio" kokoa ny zava-drehetra.
"Ny zavatra ratsy amin'ny Metro ho an'ny tiako dia nanapa-kevitra ny hampihatra izany amin'ny birao aho, ary maro no hiteny fa izy ireo dia parlas an'ny linuxer izay mankahala an'i Windows, saingy tsy (farafaharatsiny amiko) ny mampiasa azy io isan'andro amin'ny solosaina findainy. Raha mampiasa Windows aho dia hijanona ao amin'ny Windows 7. »
Raha tena tanteraka, tsy te-haka sary an-tsaina akory hoe inona no tokony hampiasana Windows 8 amin'ny birao isan'andro, fampijaliana, Metro manokana ho an'ny fitaovana mikasika.
Raha tsy hoe ... raha tsy hoe tena ahazoana aina ny mampiasa Windows 8 amin'ny birao lehibe na touchmonitor laptop, angamba (mbola tsy nanandrana azy aho) tena azo ampiharina ny fitetezana ny Metro miaraka amin'ny onjam-tananao, safidio ny taila tianao ary ahodino ny tananao. mandeha ho azy amin'ny toerana fitsaharana eo amin'ny fitendry.
Angamba foto-kevitra tena tsara io, na mety tsia, fa raha tsy ataoko manokana tsy azoko lazaina hoe mampahazo aina azy io na dia manjary miketriketrika amin'ilay eritreritra aza ny eritreritro.
"Ny firaisana, tsikerain'ny gorodona ary ra be dia be no nalaina tao amin'ny bilaogy sy forum"
Mibontsina i Sancho, milaza fa mandroso isika!
Fa ny fiovana tsara. »
Ho ahy manokana, ny hany fanovana mahafaly ahy dia ny manome vahaolana na fomba fijery vaovao, na dia tsy hita miharihary aza ny tombotsoany amin'ny voalohany.
Izaho dia mpandala ny nentin-drazana matetika amin'ny resaka fanovana, mitanisa teny anglisy fanta-daza manao hoe: "Tsy misy vaovao, vaovao tsara."
Na izany aza, raha mandray ny rivotra vaovao ny fiovana.
"Tara vao nanomboka ny Arch aho, efa nanana Systemd izy ireo,"
Rehefa nataoko ny fanovana mba systemd ny rafitra napetraka efa ho 3 taona - izao rehefa mieritreritra momba azy aho dia mahavariana, fotoana maro, wow!, Ireo fiovana lalina nitranga tamin'ny rafitra iray ihany, teo amin'izao tontolo izao sy tamin'ny fiainako ary eo izy mitohy. Andohalambo, tsy mahazaka bala!
Rehefa avy namaky ireo antontan-taratasy sy lahatsoratra tsy tambo isaina tamin'ireo forum, bilaogy ary ireo lisitra fandefasana hafatra handraketana ny tenako momba an'io lohahevitra io, nanantena aho fa matotra sy nifindra monina tsara ny systemd.
Azonao an-tsaina ve ny zavatra mitovy amin'ny distro hafa? Azo atao angamba izany na dia ny tena marina dia tsy fantatro ny tranga misy. Eny avy amin'ireo mpizara izay tsy voakitika mihitsy afa-tsy ny patch patch indraindray fa tsy amin'ny desktop. I <3 Arch Linux!
"ny daemon amin'ny voalohany (na dia tiako ho manana rc.conf aza ny hany rakitra fikirakira) sy ny zavatra hafa izay niasa ho amin'ny tsara kokoa."
Lehilahy hatsaran-tarehy io, waltz - ary tsy tiako ny ballet. Ao anaty madio / madio sy milamina /etc/rc.conf raha nanana ny rafitra rehetra natsangana tamina dingana vitsivitsy ianao dia tsara tarehy ary iray amin'ireo antony nitiavako ny fahatsoran'ny endrik'i Arch.
Na dia dragona an-doha zato aza ny systemd raha oharina amin'ny rafitra fanombohana taloha, ny zava-misy dia a) mahery dia mahery izy, afaka manao zavatra azo atao na inona na inona, b) tena mahay zavatra be izy ary malefaka, tsy dia hitako loatra ny fivoaran'ny rindrambaiko sarotra tamin'izany fotoana izany. tena azo ampiharina sy madio, vatosoa io ary c) androany tsy adala amin'ny sora-tanana aho taorian'ny nahazoako fahefana be teo am-pelatanako !!!
Ny sora-tanana (anisany /etc/rc.conf) dia tany ambanivohitra mahavariana, bucolika, tendrombohitra na morontsiraka, fahatsorana be loatra, fako very tarehy ...
systemd dia megacity amin'ny ho avy izay na ny tile aza dia manana fifandraisana IPv6, miaraka amin'ireo tombony ara-teknolojia rehetra ary tsy misy ny olany, mifanohitra amin'izany, rivotra madio, habakabaka maitso ary olona mahafinaritra be
/etc/rc.conf dia Porsche, mpanova ny systemd.
"Manantena aho fa hampihatra azy ireo fa tsy kofehy satria mety ho fahatairana lehibe hafa izany, fa zavatra maoderina kokoa noho ny menio ny toe-javatra."
Nisy fotoana nisy resaka momba ny fampifanarahana karazana kasety ho an'ny LibreOffice - na angamba tsy nahatadidy ahy ny fitadidiko ary fanesoana fotsiny izany.
Raha ny momba ny fientanam-po, raha ny fanovana dia ho tsara kokoa, miala, satria misy efa lany andro na mahazo aina, dia tsy hijanona amin'ny ambiny isika raha tsy mankafy zavatra izay mazava fa ambony.
Mazava ho azy fa amin'ny alàlan'ny fananganana haitao vaovao na paradigma dia misy fiolanan-tsaina mifandraika amin'izany fa mihabe hatrany ny zokiny, fa raha mila mitandrina ny dinôzôro ara-teknolojia isika dia mbola mitaingina finday fa tsy manana sambon-danitra .
"Niova ny zava-drehetra hatramin'ny MS Office 2010, tsy haiko, satria nanao ny zava-drehetra" madio kokoa "izy ireo.
Ary, lojika izany, hevero fa toy ny rafitra rehetra dia nohosorana rehefa mandeha ny fotoana.
Raha misy fanovana sasantsasany mandany taona maro hampiharina ao amin'ny F / LOSS noho ny antony X, rehefa maro ny mpamorona karazan-karazany rehetra, alao sary an-tsaina ao amin'ny orinasa iray izay manana fandaharam-potoana manokana sy loharanom-bola voafetra miampy ny zavatra rehetra mitranga ao anatin'ny orinasa iray
Jueeee, manana fanomezam-pahasoavana manoratra ianao, tokony hanomboka hanoratra famakafakana sy zavatra hafa ianao, mahay tsara ianao amin'izany.
Tsy haiko, heveriko fa toy ny taona maro tamin'ny firotsahana tamin'io lohahevitra io ary tena fantatro izay lazaiko - ary izay tsy fantatro dia asehoko fa tsy mangataka ny zavatra rehetra voako.
Mampalahelo fa nandefitra fandeferana iray aho tamin'ny hakamoana ara-tsaina * izay mihanaka ankehitriny amin'ny Internet ary azo antoka fa manimba ny fahalotoam-pitenenana izay nanovana ny heverina ho fahalalahan'ny Internet fa misy manoratra tsy misy dikany sy fitaomana ho an'ireo olona vao manomboka sy maniry. ianaro marina ary raiso ho toy ny fahamarinana ny asa soratra toy izany.
Fantatrao koa ve hoe impiry aho no namaky na nandre an'io hadalana io hatrany hatrany, tsy eto amin'ity faritra ity ihany fa amin'ny ankapobeny? Marina tanteraka fa ny ankamaroan'ny miaina amin'ny hazakazaka voalavo, toy ny hamster amin'ny kodiarany.
Raha msx ianao dia tokony hanao lahatsoratra mifanohitra, tsara loatra ny fanehoan-kevitrao raha tsy ho fanehoan-kevitra fotsiny.
Jereo, heveriko fa tonga lafatra ny lahatsoratrao satria amin'ny alàlan'ny hevitra manokana dia manokatra ny adihevitra momba ny ahiahy sy ny tsiron'ny mpamaky bilaogy.
Tsy miombon-kevitra aminao aho injeniera momba ny filàna lahatsoratra mifanohitra satria tsy misy dikany firy ny resaka momba an'io lohahevitra io satria: 1) hanaparitaka ny saina izany ary ho hitantsika ny hevitra naverimberina na tsy hamaly isaky ny lahatsoratra, 2) ity lahatsoratra ity sahady manana ny fiheverana rehetra mendrika ny lohahevitra, manomboka amin'ny lohateny izay tsy mamela fisalasalana momba ny atiny atrehiny sy 3) Mihevitra aho fa tsy tokony hojerena bebe kokoa ilay lohahevitra.
Ny fananana lahatsoratra tokana dia mora kokoa ny mahita ny hevitra ambara ary mamela ny hevitrao manokana 🙂
Mampiasa Libreoffice isan'andro aho mandritra ny 2 na 3 ora. Io ilay programa izay ampiasaiko indrindra nefa tsy isalasalana. Ampiasaiko amin'ny crlt + alt + j foana izany.
Ka ho azonao izany, ireo sary masina dia zavatra tsy misy dikany amiko kely, tiako ny manoratra ary ny manoratra ny zavatra tsara indrindra dia ny efijery fotsy rehetra ary tsy misy zavatra hafa mety hanelingelina ahy amin'ilay lahatsoratra ataoko. Raha mila sary masina aho dia apetrako ao amin'ny bara ambony ny takelaka fitaovana «efijery feno sy vonona». Bokotra iray ihany no ampiasaiko. Ilay iray "background de character" hanamarihana ny ampahany amin'ny lahatsoratra tsy maintsy ahitsy, sns.
Famaranana, napetrak'izy ireo ny sary masina tadiavin'izy ireo. Hanohy hampiasa Writer amin'ny efijery feno aho, tsy mila sary masina, na ny taloha na ny vaovao.
Maniry ny ahitsian'ny fanamarihana (avy amin'ny mpanoratra) aho fa tena ratsy be ny nanoratana ahy ary manana hadisoana maro. Mampanantena aho fa handinika azy io amin'ny manaraka. Miala tsiny fa misy lesoka ao amin'ilay lahatsoratra.
Ity (fanovana hevitra) dia mbola azon'ny mpitantana atao ihany, tsy noho ny fanirianay ... fa noho ny lafiny teknika dia tsy nahita fomba iray ahafahan'ireo mpampiasa hafa manitsy ny hevitr'izy ireo manokana 🙁
Mba hahafahako manitsy ny lahatsoratra, tsy hitako ny fanovana azy aorian'ny famoahana azy: \_…
Niresaka tamin'i Michael Meeks avy amin'ny LibreOffice (libreoffice@lists.freedesktop.org) ………. Nanontaniako izy raha manana API ho an'ny tranomboky VCL izay ampiasain'ny LibreOffice ……. Tsy namaly ahy izy ireo…. Izy ireo dia zara raha manana fampahalalana ho an'ny programmer vaovao… nomeny ahy ity …… .. https://wiki.documentfoundation.org/Development/WidgetLayout …… .. ity rohy ity dia mampiseho ny fomba fanaovana sy ny fiasan'ny tranomboky VCL…. http://docs.libreoffice.org/vcl/html/classes.html ..........
Ny trano famakiam-boky VCL rehetra dia tokony haverina soratana mba hifanaraka amin'ny Gtk 3.6 na Qt 4.9, asa goavana io …………… Fa ny mpamorona PYTHON, RUBY, WxWidgets, VALA, sns dia mampifanaraka ny tranombokiny amin'ny Gtk 3.6 na Qt 4.9 dia asa lehibe nefa ataon'izy ireo izany.
Rehefa mandray ny rano amin'ny fikosoham-bain'izy ireo ny tsirairay, dia entiko ihany koa any amin'ny mine. Tsy mila interface vaovao vaovao chipendilerendi na chupiguay kely kokoa ho an'ny LibO aho. Te hanana fiasa tsara kokoa sy ny zava-drehetra hijanona amin'ny fomba misy azy aho. Na dia miaraka amin'ireo sary masina mahatsiravina (sy kely indrindra) aza. Ny fahasoavan'ny LibO (sy OOA) dia ny tsara ao anatiny. Ahoana ny bikan'ny Office 95? Maniry aho WordPerfect 5.1, na Lotus 1-2-3, toa ny efijery tsy misy sary masina ny zava-drehetra. Menu efa mandeha Ny totozy sy ny fikororohana ny efijery dia fiakarana miverina… famokarana. Hiteny ny fivoarana aho, saingy nalemy ilay tionelina metacarpal.